အိမ်မှာ Whiten နည်းလမ်းကိုသုံးပြီးအံသွား Whiten လုပ်နည်း | သွားလမ်းညွှန် Whiten ဖို့အကောင်းဆုံးလမ်းစဉ်
အိမ်မှာ Whiten နည်းလမ်းကိုသုံးပြီးအံသွား Whiten လုပ်နည်း
အံသွားလှပသောတောက်ပစုံတွဲရှိခြင်းနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်သိအဖြစ်လူတိုင်းများအတွက်အိပ်မက်ဖြစ်ပါသည် သင့်ရဲ့အံသွား Whiten ဖို့ဘယ်လို. သငျသညျလညျးအံသွား whitening ကိရိယာအစုံတစ်ခုသို့မဟုတ်ပါးစပ်တွင်းကုထုံးနှင့်အတူသင်၏အံသွားတောက်ပနှင့်လည်းဖြူစေနိုင်. သို့သော်, ဤအမှုနည်းလမ်းများမဆိုအောက်ပါအံသွား whitening ပုံမှန်အားဖြင့်လူအများ၏အများဆုံးမတတ်နိုင်ကြောင်းလည်းမြင့်မားကုန်ကျ. ထို့အပြင်, ဤအမှုနည်းလမ်းများအစဉ်အမြဲအကောင်းဆုံးနဲ့အများဆုံးလိုချင်သောရလဒ်မပေးပါဘူး. အပြင် Over-the-counter ပစ္စည်းများ whitening အံသွားနှင့်စျေးကြီးသွားခွဲစိတ်ရာမှ, သငျသညျတစျခုထက်ပို option ရှိသည် သင့်ရဲ့အံသွား Whiten ဖို့ဘယ်လို သင်တို့ကိုအစွန်းအထင်း-အခမဲ့ရယူကူညီပေးသည်, သင်တို့အပေါ်မှာမဆိုဘဏ္ဍာရေးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုမပါဘဲအဖြူအံသွား pearly. သင်သိနိုင်ပါလိမ့်မည် သုံးပြီးသင့်ရဲ့အံသွား Whiten ဖို့ဘယ်လို နည်းလမ်း whitening အိမ်မှာအံသွား. နည်းစနစ် whitening မူလစာမျက်နှာအံသွားမကြာခဏပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်အခြားနည်းလမ်းများထက်အလုပ်လုပ်. ကအပြင်, အိမ်မှာ-based နည်းစနစ်သင်ဧကန်အမှန်အတတ်နိုင်ကြောင်းအနည်းငယ်သာကုန်ကျ. အောက်ကနည်းလမ်း သင့်ရဲ့အံသွား Whiten ဖို့ဘယ်လို တစ်ဦးတတ်နိုင်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်.
ဆိုဒါဖုတ်နီးပါးတိုင်းအိမ်၏မီးဖိုချောင်ထဲမှာရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်ကူညီပေးသည် သင့်ရဲ့အံသွား Whiten ဖို့ဘယ်လို. လူတွေကတစ်ဦး Tastemaker အဖြစ်မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကိုသုံး. ဖုတ်ဆိုဒါသန့်ရှင်းရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လည်းအသုံးပြုပါသည်. ဒါဟာရေခဲသေတ္တာထဲကနေနံအနံ့ဖယ်ရှားပစ်ရန်ထိထိရောက်ရောက်အလုပ်လုပ်. သင်သည်သင်၏အံသွားသန့်ရှင်းရေးဘို့မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါသုံ​​းနိုငျသ. ဆိုဒါဖုတ်သဘာဝတွင်ပွန်းစားခြင်းနှင့်ဒီ feature ကသင့်အံသွားပြင်ဘက်မှာမျက်နှာပြင်မှအစွန်းအထင်းကိုဖယ်ရှားကူညီပေးသည်. သွား Whiten များအတွက်, ဆိုဒါတစ်ဇွန်းကိုယူ, ရေအနည်းငယ်ကျဆင်းသွားပြီးစိုထိုင်းသောပျော့ပျောင်းသော-bristled သွားပွတ်တံ. သင့်ရဲ့လက်ဖဝါးပေါ်မှာဆော်ဒါ ယူ. တစ်ငါ​​းပိလုပ်ဖို့ကရေပေါက်တို့ကိုထည့်ပါ. အခုငါးပိသို့သွားပွတ်တံနှစ်နှင့်သင့်အံသွားတိုက်. သငျသညျဤနည်းလမ်းအပတ်တိုင်းတခါသလောက်လိုကျလြှောကျနိုငျ.
ကူညီရန်အခြို့ကိုအသီးအပွရှိပါတယ် သင့်ရဲ့အံသွား Whiten ဖို့ဘယ်လို; ဒါပေမဲ့စတော်ဘယ်ရီသင့်ရဲ့အံသွား Whiten နိုင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ကိုင်. ဒါဟာအလွယ်ကူဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ပစ္စည်းများ whitening ထိရောက်သောနည်းစျေးကြီးအိမ်မှာအံသွား. စတော်ဘယ်ရီတက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်ငြိုးအက်ဆစ်များပါဝင်သည်. ဒီအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းအပေါ်ကူညီပေးသည် သင့်ရဲ့အံသွား Whiten ဖို့ဘယ်လို အံသွားရဲ့မျက်နှာပြင်ကနေအစွန်းအထင်းအသတ်လျှော့ပေးရေး. အကောင်းဆုံးရလဒ်အတွက်, သငျသညျစတော်ဘယ်ရီနှင့်အတူမုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါသုံ​​းနိုငျသ. သေးငယ်တဲ့အပိုငျးပိုငျးသို့တစ်အလတ်စားမှည့်သောစတော်ဘယ်ရီ Cut နှင့်တစ်ပန်းကန်လုံးထဲတွင်အပိုင်းပိုင်းယူ. ထိုအခါက pulpy ကိုက်ညီမှုရရှိသွားတဲ့သည်အထိကောင်းစွာရောနှောနေခြင်းမှအသီးကိုမှဆော်ဒါ၏ထက်ဝက်ဇွန်းထည့်ပါနှင့်လမ်းဆုံလမ်းခွနှင့်အတူအရောအနှော mash. အခုတော့တစ်ဦးသွားပွတ်တံနှင့်အတူသင်၏အံသွားပေါ်မှာဤအရောအနှောကိုလျှောက်ထားပြီးမိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်း. ထိုအခါလွင်ပြင်ကိုရေနှင့်ကောင်းစွာသင်၏နှုတ်သုတ်ခြင်း. သငျသညျအပတ်တိုင်းအတွက်တစ်ချိန်ကအဘို့ဤလုပျနိုငျ.
ဤသည်၏အခြားကောင်းသော option ဖြစ်တယ် သင့်ရဲ့အံသွား Whiten ဖို့ဘယ်လို အိမ်မှာ. မြားစှာသောအိမ်များတွင်, ထိုသို့ဖြတ်တောက်မှုများနှင့်အသေးအဖွဲခြစ်ပိုးသတ်ဆေးရန်အသုံးပြုသည်. ၎င်းသည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အံသွား Whiten အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်. စျေးအကြီးဆုံးသွားတိုက်ဆေးအဓိကပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်ပါအောက်ဆိုဒ်ဆံ့. သင်တစ်ဦး mouthwash နဲ့လည်းအံသွား Whiten အဖြစ်အသုံးပွုနိုငျ. သင်၏နှုတ်သို့ပါအောက်ဆိုဒ်၏လေးပုံတစ်ပုံခွက်ကို ယူ. အကြောင်းကိုတစ်မိနစ်အဘို့အ gurgle. ထိုအခါလွင်ပြင်ကိုရေနှင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သင်၏နှုတ်သုတ်ခြင်း. ပိုကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရပါအောက်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်သင့်ရဲ့အံသွားတိုက်. သငျသညျအမြားဆုံးမျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်အရနေ့တိုင်းအတွက်တစ်ချိန်ကပါအောက်ဆိုဒ်ကိုသုံးနိုင်သည်.
categories: Whiten သွားသိကောင်းစရာများ Tags:: အိမ်မှာအံသွား whitening, သင့်ရဲ့အံသွား Whiten ဖို့ဘယ်လို, သင့်ရဲ့အံသွား Whiten